DEG DEG: Farmaajo oo la ogaaday in lacag malaayiin Doolar ah ka qaatay Qasnada Maamulka Gobolka Banaadir - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon DEG DEG: Farmaajo oo la ogaaday in lacag malaayiin Doolar ah ka...
DEG DEG: Farmaajo oo la ogaaday in lacag malaayiin Doolar ah ka qaatay Qasnada Maamulka Gobolka Banaadir
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmajo ayaa la sheegay inuu lacag malaayiin Doollar ah ka qaatay Qasnada Maamulka Gobolka Banaadir.
Arrintan ayaa timid, kadib markii uu kulan dhex maray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamud Maxamed (Filish), Guddoomiye ku xigeenka dhinaca Maaliyadda ee G/Banaadir C/qaadir Maxamuud Caanaboore iyo madaxweynaha xilka sii haya ee Farmaajo, iyadoo warbixin laga siiyey dhaqaalaha Gobolka Banaadir iyo lacag ku jirtay Qasnada Maamulka Gobolka Banaadir.
Khilaaf u dhaxeeyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda oo soo taagnaa tan iyo intii bishii Novembar 2020; ayaa dhowaan la xaliyey markii uu dhex galay Ra’iisal wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo kadibna looga yeeray xafiiska Madaxtooyada.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in 10-kii bishan Febraayo uu Maxamed C/llaahi Farmaajo uu xafiiskiisa ugu yeeray Cumar Filish iyo C/qaadir Caanaboore markii khilaafkoodii la dhammeeyay, iyagoo isku heystay saxiixa kharashka iyo maaliyadda Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana wadahadal kadib ay uga warbixiyeen dhaqaalaha ku jira Qasnada Maamulka G/Banaadir oo aan laga bixin qeyb ka mida mushaarka shaqaalaha maamulka G/Banaadir; waxayna ku wargeliyeen in Qasnada ku jirto lacag haraa ah oo gaareysa 2.5 Milyan oo Dollar.
Farmaajo ayaa dalbaday in lacagtaasi lagu soo wareejiyo si degdega, dalabkaas oo ay fuliyeen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa dhinaca Maaliyadda oo labadaba uu magacaabay Madaxweyne Farmaajo.